I-R940 Crawler Excavator esuka kuLibherr | ACE IMISHINI
I-R940 Crawler Excavator evela ku-Libherr
IFrance R&D nesikhungo sokukhiqiza sisanda kuqeda umshini omusha -R940 Crawler Excavator okungumkhiqizo wakamuva wochungechunge luka-R 944C
Usizakale kokuhlangenwe nakho okucebile okuvela kuLibherr, umshini omusha unekhono elihle lokusebenza, futhi lokho kungakha indinganiso entsha yesikebhe esizayo. Ngoba lo mshini ungenza ukufana okuningi nemvelo. Futhi lowo mshini futhi ungeze okungenalutho kwe-R950 ne-R960 chungechunge kungafanelana nendawo eyengeziwe yokudilizwa.
Le suti entsha yomshini yokukhishwa okujwayelekile kwe-EU-5. Futhi isilinganiso sokukhipha singafinyelela ku-200KW, ngasikhathi sinye sine-DOC, SCR sytem, ​​DPF bese wehlisa i-valve ye-EGR. Yonke leyo mishini ingenza ukonga uphethiloli futhi ivikele iNjini. Ngaphandle kwalokho, ingahlinzeka nge-Tier 4 Final version. Ekugcineni, uLibherr unikeza injini efanisiwe yemakethe ethile ekhethekile.
Nayi ingxenye eyodwa ebalulekile ye-LDC, Ngezingxenye zokuphepha ezilayishwayo, iDrayivu ingakwazi ukuma komshini nendawo ye-dozer, uma kunengozi i-LDC izowuthola umyalezo wokwazisa umshayeli.
Ngasikhathi sinye ikhabethe leDriver lenza ukulungiswa okwengeziwe njenge-Hydraulic chassis, kanye ne-plate esikhiphekayo ye-Counterweight. Umshayeli angasebenzisa futhi isiguquli somoya ukwenza umoya omusha egumbini.
Lo mshini omusha ungakha kabusha indinganiso yeDemolition Excavator.